Fotoana famakiana: 11 minitra
(Last Nohavaozina: 01/04/2021)
Intercite fiarandalamby (I C). An Intercites fiaran-dalamby dia mazava fiaran-dalamby izay tsy mandeha eo amin'ny hafainganam-pandeha avo-tsipika, ary mampifandray tanàna ary koa fohy lavitra. Afaka mividy tapakila IC mialoha ianao mba hahazoana fihenam-bidy.
Fiarandalamby haingam-pandeha (TGV). Fiaran-dalamby TGV no haingana indrindra fiaran-dalamby any Frantsa, ary ny tapakila ho azy ireo dia natao ho an'ny fividianana 90 andro mialoha. Ny vidin-javatra ho azy ireo mbola hitsangana tahaka ny daty lasa manatona, dia boky ireo tany am-boalohany noho ny vidiny ambany indrindra. A nividy tapakila 90 andro mialoha afaka lafo € 30. Fa raha toa ka mba hividy azy ireo, andro vitsivitsy talohan'ny lasa, ny vidin'ny tapakila dia mety hahatratra hatramin'ny 100 €.
tsy hanahirana. Tsy mila miahiahy momba ny fividianana ny tapakila isaky ny te-haka ny fiaran-dalamby, fa tsy maintsy manana fahafaha-misaina ianao satria tsy hanana toerana isaky ny lamasinina irinao.
AN LEHIBE NOTE: Rail Pass soa ihany no zava-dehibe noho ny vola raha mampiofana mandeha ho mihoatra noho ny 14 andro raha mandeha lavitra noho ny teboka hanondro tapakila fiaran-dalamby toy ny Save A Train dia tolotra manolotra vidiny tsara kokoa ho an'ny volanao.
Raha ny mpizaha tany tonga any Frantsa, ny ankamaroan'izy ireo dia manao an'i Paris ho fiandohan'izy ireo amin'ny dia amin'ny lalamby ao amin'ny firenena. Rehefa nanomboka tamin'ny Paris, dia afaka tonga efa misy toerana ao amin'ny firenena. Ireo no sasany amin'ireo toerana lehibe nanompo avy Paris izay ahitana fitambaran gara.
Tonga tany am-boalohany ao amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby. Aza adino ho any amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby, fara fahakeliny, 20 minitra alohan'ny lasa, na talohan'izay mihitsy aza raha toa ianao ka mandeha amin'ny gara lehibe, toy ny Gare du Nord ao Paris. Fa ny mpizaha tany izay tsy miteny frantsay, tsy misy na inona na inona ratsy kokoa noho ny tonga afa-tsy minitra vitsy alohan'ny lasa tsy manana ny hevitra kely ny hoe aiza no handeha. Tonga tany am-boalohany no hanome anareo ampy ny fotoana mba hijerena ny Fiaingana Birao for fitobiana vaovao, hamantatra izay sehatra ny fiaran-dalamby no mandao, ary tadiavo ny sehatra mety.
-Kilasy voalohany sy ny faharoa-kilasy tapakila. Tsy misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fiara kilasy voalohany sy kilasy faharoa. Na izany aza, dia mangina ao amin'ny kilasy voalohany, sy ny fipetrahan'ny kely dia lehibe kokoa. Mpanao faharoa ny kilasy fiara ihany koa mahazo aina tanteraka. Tsara ny manamarika fa ny tapakila kilasy voalohany dia mitentina eo amin'ny 1.5x mihoatra ny saran-dalan'ny kilasy faharoa.
Tsy afaka refund mora tapakila. Angamba ny hany maharatsy ny tapakila mora vidy dia ny hoe tsy azo ovaina na averina amin'ny laoniny izy ireo.
Use Chip & PIN carte de crédit. Mba hividianana tapakila amin'ny tapakila iray mandeha ho azy kiosk, dia mila ny Chip & PIN carte de crédit, ka ho azo antoka ny PIN fantatrao fehezan-dalàna, na dia tsy fahazoan-dalana izany, satria lafo be io.
Tanàn-dehibe rehetra ao Frantsa dia mifandray amin'ny TGV – haingam-pandeha ny lamasinina tambajotra amin'ny fiaran-dalamby izay mandeha amin'ny hafainganam-pandeha efa ho 200 mph. Amin'ny hafainganam-pandeha ireo, ny faritra rehetra any Frantsa dia azonao tratrarina.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “The Complete Guide To Travel any Frantsa By Train” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https: //www.saveatrain.com% Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#sncf TGV TrainStation tapakila fiaran-dalamby Train Travel traintravelfrance travelfrance